Iimiphumo zezempilo ezingalunganga zokufudumala kwehlabathi
Izifo ezithathelwanayo kunye neeRhafu zokuFafa ziyaphakama kunye neHlabathi leHlabathi
Ukufudumala kwehlabathi akuyona nje isongelo kwimpilo yethu yesikhathi esizayo, isele igalelo ekufeni kwabantu abangaphezu kwe-150,000 kunye nezifo ezigidi ezi-5 ngonyaka, ngokweqela lezempilo kunye nezesimo sezulu kwi-World Health Organization kunye neYunivesithi yaseWisconsin eMadison. loo manani ayenokuphindwa kabini ngo-2030.
Idatha yophando epapashwe kwiphephancwadi I- Nature ibonisa ukuba ukufudumala kwehlabathi kungathintela impilo yempilo ngeendlela ezininzi ezimangalisayo: ukukhawulezisa ukusasazeka kwezifo ezithathelwanayo ezifana ne-malaria kunye ne-dengue fever; ukudala iimeko ezikhokelela ekungondlekeni kokungondleki nokurhudo, nokunyusa amathuba okushisa kwamaza kunye nezikhukhula.
Iimiphumo zeMpilo zoHukelo lweMhlaba jikelele kunzima kwiZizwe ezihluphekileyo
Ngokwezenzululwazi, ngubani ophepheni iimpembelelo zempilo ezikhulayo zokufudumala kwehlabathi, idatha ibonisa ukuba ukufudumala kwehlabathi kuchaphazela imimandla eyahlukileyo ngeendlela ezahlukeneyo. Ukufudumala kwehlabathi ngokugqithiseleyo kunzima kubantu abakumazwe ahluphekileyo, okuyiyo ingxaki kuba iindawo eziye zanikela ngencinci ekufudumeni kwehlabathi zixhatshazwa kakhulu ekufeni nasezikhusheni eziphezulu ezikhuphayo.
"Abancinci abakwaziyo ukujamelana nokubhekiselele kwiindawo zokufudumala kwehlabathi ezichaphazela ukufudumala kwehlabathi," kusho umlobi okhokelayo uJonathan Patz, uprofesa kwi-UW-Madison kaGaylord Nelson Institute for Environmental Studies. "Kule ndawo inomngeni omkhulu wemimiselo yehlabathi."
Iimimandla zehlabathi kwiindawo eziphezulu kunobungozi bokufudumala kwehlabathi
Ngokombiko weNdalo , imimandla engozi enkulu yokunyamezela imiphumo yempilo yenguqu yemozulu iquka ulwandle oluhamba kunye nolwandle lwasePacific nolwandle lwamaNdiya nakumazantsi ase-Sahara.
Iidolophu ezininzi ezityhutyhayo, kunye neziphumo zaso "zasemaphandleni" ezisemadolobheni, nazo zijongene neengxaki zempilo ezinxulumene neqondo lokushisa. I-Afrika inamanye amashishini aphantsi aphethwe yi- gazhouse green . Sekunjalo, imimandla yelizwekazi likhulu kakhulu engozini yezifo ezinxulumene nokufudumala kwehlabathi.
"Izifo ezininzi ezibalulekileyo kumazwe ahluphekileyo, ezivela kwi-malaria ukuya kuhudo kunye nokungondleki, zixhalabele kakhulu kwimozulu," kusho umbhali-mbhali uDiarmid Campbell-Lendrum we-WHO.
Icandelo lezeMpilo sele lisahlula ukulawula ezi zifo kunye noshintsho lwemozulu olungazisongela le mizamo. "
Iziganeko ezidlulileyo zemozulu ziye zagxininisa ingozi kwimpilo yabantu kunye nokuphila, "wongezelela uTony McMichael, umlawuli weSizwe soLuntu nge-Epidemiology kunye ne-Population Health kwi-Yunivesithi yesizwe yase-Australia. Leli phepha lidibanisa indlela eya kuphando olucwangcisekileyo oluphonononga kangangoko ingozi kwimpilo evela kutshintsho lwemozulu. "
Iimbopheleleko Zomhlaba Wonke Eziphuhlisiwe Nokuphuhliswa Kwezizwe
I-United States, okwangoku ikhupha i-gases engaphezulu kweendlu ezincinci kunanoma yimuphi uhlanga, inqatshelwe ukuvumelanisa i- Kyoto Protocol , ekukhethiweyo ukuba iqalise inzame ehlukeneyo yelizwe kunye neenjongo ezinqwenelekayo. UPatz kunye nabalingane bakhe bathi umsebenzi wabo ubonakalisa uxanduva lokuziphatha kwamanye amazwe anemiphumo ephakamileyo ephezulu, njengamazwe aseMerika naseYurophu, ukukhokela ekunciphiseni izinsongo zempilo zokufudumala kwehlabathi. Umsebenzi wabo uphinde ugxininise imfuneko yokwanda kwezoqoqosho, ezinjengeTshayina ne-Indiya, ukuphuhlisa imigaqo-nkqubo enamandla.
Isisombululo sezopolitiko sabaphathi-nkqubo siya kudlala indima enkulu ekusebenziseni ukuguqulwa kwemozulu eyenziwa ngumntu, "kusho uPatz, ophethe inxaxheba ngokubambisana kunye ne-UW-Madison isebe le-Population Health Sciences.
Ukufudumala kweMhlaba kuPhezulu
Iingcali zenzululwazi zikholelwa ukuba i-greenhouse gases iya kunyusa izinga lokushisa eliphakathi kwama-6 degrees Fahrenheit ekupheleni kwekhulu. Izikhukula, amaqhwithi kunye namaza okufudumalayo angabetha ngokuphindaphindiweyo. Ezinye izinto ezifana nokunkcenkceshela nokukhungulwa kwamahlathi kungatshintshisa amaqondo okushisa kunye nendawo.
Ngokutsho kweqela le-UW-Madison kunye ne-WHO, ezinye iziganeko ezixhomekeke kwiimpawu zengozi zempilo ezivela kwiprojekthi yenguqu yemozulu yehlabathi:
Ingozi echaphazelekayo yemozulu yeziphumo ezahlukeneyo zezempilo ezivivinywa yi-WHO ziya kuphinda ziphindwe kabini ngo-2030.
Umkhukula ngenxa yesigxobhozo sogonyamelo lonxweme kuya kubuchaphazela ubomi be-200 yezigidi zabantu ngabantu abangama-2080.
Ukufa okunxulumene nokufudumala okufudumeleyo eCalifornia kungaphaya kabini nge-2100.
Iintsuku zokungcoliseka kwe-ozone kwi-Eastern I-US inokunyusa ama-60 ekhulwini ngo-2050.
Abantu ngabanye bangenza umehluko
Ngaphandle kophando kunye nenkxaso efunekayo yabapolisi emhlabeni wonke, uPatz uthi abantu banokudlala indima ebalulekileyo ekunqandeni imiphumo yempilo yokufudumala kwehlabathi .
Iindlela zethu zokuhlambalaza zichaphazela abanye abantu emhlabeni wonke, ngakumbi abahlwempuzekileyo, "kusho uPatz. "Kukho iindlela ezikhoyo zokukhokelela ubomi obunempilo obunokuthi benze ukuba abantu benze ukhetho olungcono."
I-Carbon Dioxide, Inombolo eyodwa yeGesi yokuGcina
I-Phenology ye-Spring kunye ne-Global Climate Change
Johan August Arfwedson Biography
Abafazi kunye neMfazwe Yehlabathi II - Abachasene
Iqela eligqibeleleyo: Ukuphonononga okokuqala
Ukuvavanya okuqhelekileyo kwabafundi basekhaya
Ukusetyenziswa kweNgqungquthela "Kwi"
I-Steve Winwood Iingoma eziphezulu ze-80s
I-Manon Synopsis: Ibali le-Jules Massenet ye-Opera
Ukuvelisa, i-Provenance, Masibize yonke into
Ukuhlanganiswa kwe "Werden" (ukuba abe) kwisiJamani